တှငျနထေိုငျလူမည်မျှ Rostov-on-Don ကော? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
တှငျနထေိုငျလူမည်မျှ Rostov-on-Don ကော?
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 050 000 သူမြို့သား
တစ်နှစ်နေဖြင့်လူဦးရေ (တထောင်။ သူမြို့သား)
1997 နှစ်ပေါင်း 1023.0
1998 နှစ်ပေါင်း 1020.0
1999 နှစ်ပေါင်း 1017.3
2000 နှစ်ပေါင်း 1012.7
2001 နှစ်ပေါင်း 1009.0
2002 တစ်နှစ် (ဎ။ ) 1068.0
2003 နှစ်ပေါင်း 1068.3
2004 နှစ်ပေါင်း 1062.0
2005 နှစ်ပေါင်း 1058.0
2006 နှစ်ပေါင်း 1054.9
2007 နှစ်ပေါင်း 1051.6
2008 နှစ်ပေါင်း 1048.7
2009 နှစ်ပေါင်း 1049.0
2010 တစ်နှစ် (ဎ။ )
မြို့ပြဧရိယာများ, 1.01.2010 မှာလူဦးရေ
Voroshilov လီနင် 200.4 76.9 126.0 Proletarian
အဆိုပါအောက်တိုဘာလမီးရထား 92.2 152.9 167.3 ဆိုဗီယက်
Kirov 59.0 173.4 Pervomaiskii
အဆိုပါ 2010 1 သန်း, 48,1 တထောင်၏လူဦးရေ၌တည်၏။ Rostov-on-Don မွို့၌ပြည်သူ့။
ရိုးရှင်းစွာအ # 769; In-On-ဒွန် # 769; အရှေ့ဥရောပရိုးရိုး၏တောင်ဘက်-အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိသောရုရှား၌မြို့သည်, ဒွန်မြစ်၏ဘဏ်များအပေါ်, 46 ထဲမှာ Azov များ၏ပင်လယ်, မော်စကို 1094 ကီလိုမီတာမှအကွာအဝေးသို့စီးဆင်းရှိရာကနေကီလိုမီတာ။ 13 မေလ 2000, တောင်ပိုင်းဖက်ဒရယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာနနှင့်အတူ Rostov ဒေသများ၏အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာန။ 1749, Empress အဲလစ်ဇဘက်ရဲ့အမိန့်ထဲမှာကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
Rostov-on-Don, တောင်ရုရှားနိုင်ငံမြို့တော် 1,048 သန်းလူဦးရေနှင့်အတူတိုင်းပြည်၏အဓိက, အုပ်ချုပ်ရေး, ယဉ်ကျေးမှု, သိပ္ပံနည်းကျ, ပညာရေးနှင့်စက်မှုဗဟိုဌာနဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမြို့တောင်ပိုင်းရုရှားတွင်အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာဖြစ်ပါသည်, ကကော့ကေးဆပ်ပြည်နယ်၏တံခါးလို့ခေါ်ပါတယ်။
5 မေလ 2008 ရုရှားသမ္မတ၏အမိန့်, Rostov-on-Don ၏မြို့ pochtnoe ရုရှား, စစ်ရေးဘုနျးစီးတီး၏ခေါင်းစဉ်ကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ http://ru.wikipedia.org/wiki/Ростов-на-Дону
Posted in, အမြဲတမ်း, Real Estate
64 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,221 စက္ကန့်ကျော် Generate ။